Iindaba - Ngaba uthathe inxaxheba kwi-CMEF 2020?
I-HAIYAN KANGYUAN KWEZONYANGO ZOKUSEBENZISA I-CO., LTD.
Izixhobo zokuthintela ubhubhane
Ngaba uthathe inxaxheba kwi-CMEF 2020?
I-19/10/2020 yayikukuvulwa okuhle kwe-83th China International Medical Equipment Fair (CMEF) kunye ne-30th International Component Manufacturing & Design Show (ICMD) e-Shanghai National Exhibition Centre.
Inani elikhulu lamashishini agqwesileyo asekhaya athathe inxaxheba kwezi ziganeko zibini zingazange zibonwe.
Emva kwamashumi eminyaka wokuqokelela kunye nemvula, i-CMEF kunye ne-ICMD ziye zaphuhliswa njengeqonga lehlabathi elihamba phambili lenkonzo egubungela yonke imixokelelwano yezixhobo zonyango, ukudibanisa itekhnoloji yemveliso, ukumiliselwa kwemveliso entsha, urhwebo lokuthengwa kwempahla, intsebenziswano yophando lwezenzululwazi, njl. Ukubonisa itekhnoloji yamva nje kwicandelo lokuvelisa izixhobo zonyango, kunye nokukhuthaza ukusebenzisana kwekhonkco lezentengiso jikelele lezixhobo zonyango.
Kuxelwe ukuba umboniso weentsuku ezine ubuneeholo ezisibhozo, zigubungela indawo ye-220000 yeemitha zesikwere. Iingqungquthela ezingama-60 zezifundo kunye neeforamu, ngaphezulu kweenkokheli zeshishini ezingama-300 nangaphezulu kokuqaliswa kwemveliso entsha eyi-1500 kusizisela ukuba sijonge ubuchwephesha obunqabileyo.
Njengenkokeli kushishino lwezixhobo ezisetyenziswayo, inkampani yethu iHaiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd.
Ibonakalise umnquba wayo x38 kwiHolo 1.1 ebonakalise ikakhulu iintlobo ezahlukeneyo zeketera yokuchama, indawo yokuhamba yentsimbi, ityhubhu endotracheal, ityhubhu yesisu, izixhobo zokuthintela ubhubhane kunye nezinye iimveliso.
Zonke zaphuhliswa kwaye zenziwa yinkampani yethu.
Kukho ukuhamba okuqhubekayo kwabathengi / iindwendwe ezibonise umdla omkhulu kwiimveliso zethu kwaye zijonge phambili kwintsebenziswano.
Kwi-2020 ubhubhane weCorvid-19 wazisa umhlaba wonke ubunzima, ngeli xesha usizisele imiceli mngeni kunye namathuba. Njengelungu leqela lemfazwe yokulwa lo bhubhane, i-Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co, Ltd. kufuneka ibe yeyokuqala ukuthwala ubunzima besi sifo, inike inkxaso eyoneleyo yezixhobo, ijolise kwizinto ezintsha nakwimpumelelo, kwaye izame ukwenza igalelo elingaphezulu emfazweni ngokuchasene nobhubhane.
Kwixa elizayo, uKangyuan akayikulibala injongo yakhe yoqobo, ukuqhubela phambili, ukuphonononga umkhombandlela omtsha kwinto entsha kwishishini lezixhobo zonyango laseTshayina, kwaye azise utshintsho olunzulu kushishino lwezonyango kunye nakwezempilo.
Isikhumbuzo esishushu: ngokweemfuno zomsebenzi wokuthintela ubhubhane, ngaphambi kokungena kwiholo yomboniso, zonke iindwendwe kufuneka zinxibe iimaski, zibonise amakhadi abo esazisi, kunye neKhowudi yeMpilo yeShanghai esetyenziswe eAlipay okanye eWeChat.
Iimveliso zethu eziphambili zezi: Abicah Foley Catheter, Laryngeal Mask Airway, Abicah esiswini ityhubhu, Endotracheal Tube, njl
Lwedilesi: Songpodong Road, Shendang Town, Haiyan, Zhejiang, China
Ifowuni: 15825721708 / 0086-573-86725883 / 0086-573-86725885
Kutheni i-Kangyuan's Laryngeal Mask Airway?
Njani malunga neekangatsi zeekangyuan zokuchama